अर्पण शर्मा, तेज स्मरण शक्तिमा विश्व कीर्तिमानी | बैशाख ०८, २०७४
-पाँचवटै इन्द्रियको प्रयोग गर्नुभयो ? अब दोस्रो नम्बरमा चरा छ । यसलाई पनि त्यसै गरी कल्पना गरौँ । अब त्यो सुन्तलालाई चराले खाँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । यसरी नै कथा बनाउन थाल्नुहोस् । दिइएका शब्दबारे दिमागमा चलचित्र नै बनाउनुहोस् । यो चलचित्र हिट बनाउने कि फ्लप, आफ्नै हातमा छ । हिट हुनु भनेको सबै कुरा सम्झिनु हो । अब सुन्तला खाँदै गरेको चराले गाडी (तीन नम्बर) कुदाउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । त्यसपछि चराले गाडी कुदाउँदै गर्दा एउटा हात्ती (४ नम्बर) अगाडि आएको र त्यो हात्तीले साइकल (५ नम्बर) कुदाउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् । याद राख्नुस्, कल्पना गर्दा जति हाँसउठ्दो र आश्चर्यजनक बनाउनुहुन्छ, त्यति नै याद गर्न सजिलो हुन्छ । अब साइकल कुदाउँदै त्यो हात्ती हस्पिटल (६ नम्बर) गएको कल्पना गर्नुहोस् । जहाँ उसको साथी (७ नम्बर) भर्ना भएको छ । यो सबै कल्पना गर्दै जानुस्, एउटा हाँसउठ्दो र रमाइलो कथा बनाउँदै जानुहोस् । यसरी ३० वटै शब्दलाई सृजनात्मक तरिकाले चित्र बनाउँदै जानुहोस् । सकियो ? अब त्यो पूरै कहानी एकपल्ट आँखा चिम्लेर फेरि कल्पना गर्नुहोस् ।